ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြင်သစ်ကို အလဲထိုးခဲ့တဲ့ နယ်သာလန်
FRI 16 NOV 2018 UEFA NATIONS LEAGUE - GROUP A1
Netherlands20 France
Wijnaldum (44' minutes), Depay (90'+6 minutes pen)	 FT
17 Nov 2018 . 9:06 AM
နည်းပြရော်နယ်ကိုးမန်း Ronald Koeman လက်ထက်မှာ ပုံစံကောင်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ဦးမော့လာတဲ့ နယ်သာလန်အသင်းဟာ Nations League ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြင်သစ်အသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာလည်း နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ အကောင်းဆုံးမှာရှိခဲ့ပြီး ( ၂ – ၀ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နယ်သာလန် ၂ – ၀ ပြင်သစ်
နယ်သာလန်အသင်းဟာ အတောင့်တင်းဆုံးလူစာရင်းနဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို ဒီပိုင်း Depay ဟာ ဦးဆောင်လာခဲ့သလို ဘာဘယ် Babel ၊ ၀ိုင်နယ်ဒမ် Wijnaldum ၊ ဒီယွန်း De Jong ၊ ဒီိလိဂ် De Ligt ၊ ဗန်ဒိုက် Van Dijk ၊ ဘလင်း Blind တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းမှာတော့ ပေါ့ဘာ Pogba မပါဝင်ခဲ့တာကလွဲရင် ပုံမှန်ပွဲထွက်နေကြ လူစာရင်းနဲ့ပဲပွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ နယ်သာလန်အသင်းဟာ ပွဲအစထဲက ပြင်သစ်အသင်းကို ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နှစ်သင်းလုံးဟာ အပြန်အလှန်ထိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ပွဲဟာရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးခါနီး ပွဲချိန်(၄၄)မိနစ်မှာတော့ နယ်သာလန်အသင်းဦးဆောင်ဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်လူ ၀ိုင်နယ်ဒမ် က ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း နယ်သာလန်အသင်းကပဲ ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းကတော့ ခံစစ်ပိုင်းမှာသာအချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။ နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်ကန်သွင်းမှုတွေကိုလည်း ဂိုးသမားလိုရစ် Lloris လက်စွမ်းပြကာကွယ်နေလို့သာ ပြင်သစ်အသင်း သက်သာရာရခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာ ဘာဘယ် ၊ ဒီပိုင်းတို့ရဲ့ တိုးအား ရုန်းအားတွေဟာ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကိုအလုပ်ရှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးခါနီးမှာ ဒီယွန်း ကိုပြင်သစ်အသင်းက ကစားပုံကြမ်းခဲ့လို့ နယ်သာလန်အသင်း ပယ်နယ်တီရရှိခဲ့ပြီး ဒီပယ်နယ်တီကို ပွဲချိန်(၉၆)မိနစ်မှာ ဒီပိုင်း ကလှလှပပကန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ နယ်သာလန်အသင်းရဲ့ နိုင်ပွဲကြောင့် ပြင်သစ်အသင်းရရှိထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ(၁၅)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ဟာ ကျိုးပျက်ခဲ့သလို ဂျာမနီအသင်းဟာလည်း League A ကနေတန်းဆင်းခဲ့ရပါတယ်။
Nations League ပြိုင်ပွဲရလဒ်များ
Netherlands2–0France
Slovakia4– 1 Ukraine
Wales 1 –2Denmark
Cyprus 1 – 1 Bulgaria
Slovenia 1 – 1 Norway
Gibraltar2–6Armenia
Liechtenstein0–2FYR Macedonia
Photo: Dutch Football Twitter , Marca
ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ ပွငျသဈကို အလဲထိုးခဲ့တဲ့ နယျသာလနျ
နညျးပွရျောနယျကိုးမနျး Ronald Koeman လကျထကျမှာ ပုံစံကောငျးတှနေဲ့ ပွနျလညျဦးမော့လာတဲ့ နယျသာလနျအသငျးဟာ Nations League ပွိုငျပှဲမှာလညျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ ပွငျသဈအသငျးကို အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာလညျး နယျသာလနျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးဟာ အကောငျးဆုံးမှာရှိခဲ့ပွီး ( ၂ – ၀ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နယျသာလနျ ၂ – ၀ ပွငျသဈ
နယျသာလနျအသငျးဟာ အတောငျ့တငျးဆုံးလူစာရငျးနဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့ပွီး အသငျးရဲ့တိုကျစဈကို ဒီပိုငျး Depay ဟာ ဦးဆောငျလာခဲ့သလို ဘာဘယျ Babel ၊ ဝိုငျနယျဒမျ Wijnaldum ၊ ဒီယှနျး De Jong ၊ ဒီလိဂျ De Ligt ၊ ဗနျဒိုကျ Van Dijk ၊ ဘလငျး Blind တို့လညျးပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ။ ပွငျသဈအသငျးမှာတော့ ပေါ့ဘာ Pogba မပါဝငျခဲ့တာကလှဲရငျ ပုံမှနျပှဲထှကျနကွေ လူစာရငျးနဲ့ပဲပှဲထှကျခဲ့တာပါ။ နယျသာလနျအသငျးဟာ ပှဲအစထဲက ပွငျသဈအသငျးကို ဖိအားပေးကစားနိုငျခဲ့တာကိုတှခေဲ့ရပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ နှဈသငျးလုံးဟာ အပွနျအလှနျထိုးဖောကျမှုတှပွေုလုပျနိုငျခဲ့ကွပွီး ပှဲဟာရငျခုနျစရာကောငျးခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးပွီးခါနီး ပှဲခြိနျ(၄၄)မိနဈမှာတော့ နယျသာလနျအသငျးဦးဆောငျဂိုးရရှိခဲ့ပွီး ကှငျးလယျလူ ဝိုငျနယျဒမျ က ရရှိလာတဲ့ အခှငျ့အရေးကို အကောငျးဆုံးအသုံးခကြနျသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျးမှာလညျး နယျသာလနျအသငျးကပဲ ဖိအားပေးကစားနိုငျခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးကတော့ ခံစဈပိုငျးမှာသာအခြိနျကုနျနခေဲ့ပါတယျ။ နယျသာလနျအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျကနျသှငျးမှုတှကေိုလညျး ဂိုးသမားလိုရဈ Lloris လကျစှမျးပွကာကှယျနလေို့သာ ပွငျသဈအသငျး သကျသာရာရခဲ့တာပါ။ ဒီပှဲမှာ ဘာဘယျ ၊ ဒီပိုငျးတို့ရဲ့ တိုးအား ရုနျးအားတှဟော ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ခံစဈကိုအလုပျရှုပျစခေဲ့ပါတယျ။ ပှဲပွီးခါနီးမှာ ဒီယှနျး ကိုပွငျသဈအသငျးက ကစားပုံကွမျးခဲ့လို့ နယျသာလနျအသငျး ပယျနယျတီရရှိခဲ့ပွီး ဒီပယျနယျတီကို ပှဲခြိနျ(၉၆)မိနဈမှာ ဒီပိုငျး ကလှလှပပကနျသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ နယျသာလနျအသငျးရဲ့ နိုငျပှဲကွောငျ့ ပွငျသဈအသငျးရရှိထားတဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ(၁၅)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျဟာ ကြိုးပကျြခဲ့သလို ဂြာမနီအသငျးဟာလညျး League A ကနတေနျးဆငျးခဲ့ရပါတယျ။
Nations League ပွိုငျပှဲရလဒျမြား
by Naing Linn . 55 mins ago